सुगरको समस्यालाई जरैदेखि निर्मुल पार्न प्रयोग गर्नुहोस् मेथी, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सुगरको समस्यालाई जरैदेखि निर्मुल पार्न प्रयोग गर्नुहोस् मेथी
काठमाडौं । भान्सामा प्रयोग हुने, जसलाई हामीले खानालाई स्वादिष्ट बनाउनको लागि प्रयोग गर्छौं, ती सामानहरु औषधिको रुपमा समेत प्रयोग हुन सक्छन् । जस्तै, तरकारी, अचारमा प्रयोग गरिने मेथीलाई हामीले सुगर कन्ट्रोलको लागि पनि प्रयोग गर्न सक्छौं।
मेथी कसरी बन्छ त सुगर कन्ट्रोलको औषधी
एक चम्चा मेथीलाई ओखलमा वा मिक्सरमा राख्नुहोस्।
एक गिलास पानी लिनुहोस्।
त्यो एक गिलास पानीमा अघि पिसेको मेथीको धुलो राखेर घोल्नुहोस्।
यसलाई हरेक दिन बिहान बेलुका नियम नै बनाएर पिउने गर्नुहोस्।
मेथी पानी सुगरलाई मात्र नभएर हाडजोर्नी दुख्नेहरुको लागि पनि लाभदायक हुन्छ। यो मेथी पानीलाई तबसम्म नियमित रुपमा पिउनुहोस्, जबसम्म तपाईंको सुगर लेभेल कन्ट्रोल हुँदैन।